palpalkokhabar – Page 4
Kathmandu- Generation Next Communications Pvt. Ltd., authorized distributor for Apple in Nepal, has been distributing genuine Apple products in the market for years now. Genxt, the only distributor of Apple iPhones and Apple products (MacBooks, iPad , iMac) in Nepal has […]
काठमाडौं । एनसेलका सबै फोरजीग्राहकले अब लोकप्रिय भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म युट्युबबाट भरपुर फाइदालिनसक्छन् । भिडियो सामाग्रीहरु हेर्दा धेरै डेटा खपतहुने र शुल्कपनि बढि लाग्ने चिन्ताबाट मुक्तहुँदैग्राहकले युट्युबको प्रयोग गर्न सक्छन् । एनसेलको प्राइभेट लिमिटेडले आफ्नो नयाँ ‘प्लस’थिमअन्तर्गत आफ्ना फोरजीग्राहककालागिआकर्षक ‘ननस्टप […]
काठमाडौं । क्रिएशनले कोका—कोला नेपालको साथमा सफाईकर्मीहरु र उनीहरुको परिवारलाई कोभिड—१९ को नकारात्मक प्रभावबाट सुरक्षित राख्न राहत तथा सुरक्षा सामग्री प्रदान गर्दै चितवनमा दोस्रो चरणको राहत वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यो राहत वितरण कार्यक्रम क्रिएशन र कोका—कोला नेपालको […]
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालले एक्जिम कोड नवीकरणको म्याद थप गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकसँग आग्रह गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य तथा राजस्व समितिका उपसभापति समेत रहेका नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले मंगलवार भन्सार विभागका महानिर्देशक […]
रोल्पा । पहिरोले बिजुलीको पोल ढालेपछि रोल्पाको होलेरी क्षेत्र ५ दिनदेखि अन्धकार बनेको छ । घोराही उपमहानगरपालिका–१९ स्थित बगालेमा शनिवार पहिरोले बिजुलीको पोल बगाएपछि अवरुद्ध विद्युत्सेवा अझैसम्म सुचारु हुन सकेको छैन् । विद्युतसेवा अवरुद्ध हुँदा होलेरी क्षेत्रमा सम्पूर्ण कार्यालयहरुको सेवा […]
चितवन । केही दिनदेखि भरतपुरको गोन्द्राङस्थित बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेडमा कार्यरत मजदुरहरू आन्दोलित भएका छन् । कम्पनी अन्तर्गतको बेयर हाउस विभागमा कार्यरत ४४ जना मजदुरलाई कम्पनीले कामबाट निकालेको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । उनीहरूलाई ठेकेदार कम्पनी पवन ढुवानीले कामबाट […]
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले विश्व बैंक सदस्य समूह (आईएफसी) बाट २५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ करीब ३ अर्ब पुनर्कर्जा ल्याउन मंगलवार आईएफसीसँग समझदारी गरेको छ । समझदारीमा एनएमबि बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी र आईएफसीका एक्टिङ […]